Laab-qaboojis!!!. Burhaan Cali | Doodwadaag waa Danwadaag.
Laab-qaboojis!!!. Burhaan Cali
Waxaannu nahay dhallinyaradii dunida, waxaannu nahay xoogga wax curiya, waxna baddala. Dhallinyaradayadaas waxaanu ku kala nool nahay cirifyada dunida. Waxaannu leenahay midabbo, afaf iyo dhaqammo kala duwan. Haddii dhankaa laga eego waxba ma wadaagno oo midabadeyada, afafkaykayaga iyo diimahayaga ayaa na kala soocay. Waxaannu isu nahay cadaw. Haddii dhan kale laga eega se dhammaantayo waxaanu doonaynaa nolol tayo wanaagsan iyo duni nabad iyo naxariisi buuxisay. Way caddahay oo waxaanu doonayno ayaa na mideeya bal se niyaddu badanaaba lama falgasho waaqica uu ku nool yahay mid kasta oo dhallinyarada dunida ka mid ah.
Dhallintu kala nasiib roon oo qaar baa isbadalka ay doonayaan uu ugu yimaadaa qaab mira gurasho (harvesting), yacni waxay la kawsadaan wejiga dambe ee hawl muddo dheer soo socotay. Waa hawl u baahan sahamin dhul beereed, cimilo ku habboon dalagga aad beeraysid, dhir qaad, xagaafid, iniinyo beerid, waraabin, cayayaan iyo xayawaanba ka ilaalin illaa iyo inta miraha la guranayo. Waa hawl aan qof kaliya ka bixi karin xittaa qoys kaliya uusan ka bixi karin, waa hawl u baahan iskaashi bulsho oo dhamaystiran si ubadkoodu miraha u gurtaan, deedna iyagu hawsha halkaa kala sii wareegaan.
Dhallintaas abkoodii hore ayaa gartay inaan far kaliya fool dhaqi karin, gacmana wadajir wax ku gooyaan, midnimadanu tiir dhaxaad u tahay guusha halganka nolosha. Midnimo ma jirayso haddaan loo samayn Xeer (Dastuur iyo Garsoor) iyo Xoog ciidan oo ilaaliya. Xeer iyo Xoogna waxay u baahan yihiin Xilqaade iyo xaruntiisii(dawlad) ay ka xog qaataan. Dhallintaasu dhallinyaranimadooda waxay ku qaataan layli maskaxeed iyo mid jireed oo joogto ah iyo u diyaar garow maalintii hawshu ku soo wareegto. Iyagoo ilaalinaya Xeerkii iyo Xooggii isku hayey ayay waxay diiradda saaraan maxaa ammintan soconaya oo aan soo kordhinaa. Hal abuurkoodii bay Hal abuurkii ka horreeyey ku daba qabtaan. Sidii loogu beeray ayay iyaguna ugu beeraan jiilka xiga. Waxay odorasaan timaadada iyagoo ka shidaal qaadanaya tagtadii.
Annagu, dhaxalkii awoowayaasheen iskii buu u gaboobay una baaba’ay waayo muddo hore ayay ku qanceen inay ku ekaadaan qoys, wax soosaarkooduna baahida taagan ee qoyska ayuu daboolay.
Dhaxalkaa intii yarayd ee badbaadayna innagaa aasnay kas iyo kama’ midkay doontaba ka ahaatee. Waxaanu nolosha la wadaagnaa dhallintaa u sahan taga circa iyo badaha guntooda markay sahan ku dhameeyeen oogada dhulka ee muuqata. Waa kaaf iyo kala dheeri! Qorraxdu way noo soo baxdaa wayna noo dhacdaa, Waannu iska noolnahay! La isma waydiiyo sidan aynu u noolnahay, waayo waxaanu haysannaa jawaabo laabta inoo qaboojiya! Waa Gaalo oo Rabbi baa ku imtixaanaya, waa Qaddar Rabbi, Ganaax Rabbi ayaa ina haysta…iwm, innagoo si dhab ah u ogsoon inaan xoolo iyo nolol tayo leh ina siinayn haddaynaan shaqaysan. Waxaynu mar walba curinaa sheekooyin laab qaboojis ah bal se aan xaqiiqada nolosheena waxba ka baddalin.
Beryahaan waxaa innagu soo batay ammaanta iyo xiisaynta taariikh nololeedka Gaal caan ahaa oo soo Islaamay sidoo kale mucjisooyin gacan ku rimis ah iyo dabagalkooda sida khudaar magaca Eebbe lagu arkay! Waa daroogo aynu kaga waji qarsanayno xanuunka iyo fashilka nolosha innaga qabsaday. Maxaad kaloo ku sheegi lahayd sheekooyinkaa iyo kuwo la mid ah oon ka ahayn ‘Laab Qaboojis’!
W/Q Ustaad Burhaan Cali